Maitiro ekuziva kana yangu Wi-Fi iri kubiwa muLinux | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uchifungidzira kuti yako Wi-Fi iri kubiwa muLinux, usazvidya moyo, sezvo isu tichikuunzira mhinduro dzinoverengeka kuti uone uye kugadzirisa dambudziko
Munguva dzino dzakaipa dzinomhanya uye munyika umo zvave kuve nyore kuba Wi-Fi nekuda kwekushandisa masisitimu senge Wifislax, pane kuwedzera kunetsekana kwekuti kubatika kweWi-Fi kuri kubiwa.
Kana iwe uine Linux inoshanda sisitimu uye iwe uchida kuziva kana yako Wi-Fi iri kubiwa, iwe uri munzvimbo chaiyo, sezvo tichaenda kukudzidzisa nzira dzinoverengeka nhanho nhanho saka unoziva kana yako Wi-Fi yakachengeteka kana kwete.
1 Ziva yangu IP kero uye Wi-Fi gedhi
2 Isa uye shandisa NMap
3 Zvirwise pachako
5 Chinja password uye chengetedza
Ziva yangu IP kero uye Wi-Fi gedhi
Chekutanga pane zvese kuziva kuti ndeipi IP yemidziyo yatiri kushandisa. Zvazviri isu tichaenda kushandisa yekare ifconfig raira mairi iyo ichatiudza isu zvese yedu IP kero uye yedu gedhi (router kero). Kunze kwekunge isu tiri kushandisa chimwe chishandiso chakabatana neRouter, musimboti chete iyo IP yekombuta yedu uye iyo gedhi inofanirwa kuoneka ichishanda.
Isa uye shandisa NMap
NMap chishandiso chakanakisa chinotibvumidza kuti tizive kuti ndeapi michina inosunganidzwa kunetiweki yedu. Kuiisa isu tichaenda kunotevera kuraira(chete zveanoshanda masystem ane apt seyekuchengetedza).
Rangarira kuti kana iwe uine iyo Debian inoshanda system, iwe unofanirwa kuisa su mune wakasiyana kuraira pane Sudo.
Iye zvino tave kuzoita unotevera kuraira muNMap, iyo ichatiudza kuti ndeapi makomputa ari kushanda muNetwork yedu, kutsiva izwi IP nekero yeiyo raira regedhi, Semuyenzaniso 192.168.0.1
Zvino pakati pezvimwe zvinhu ichatiudza zvikwata zvinoshanda mukati meIP iyo inotibvumidza isu kuti ive network network. Chinhu chakajairika ndechekuti pane chete maviri anoshanda anoshanda (router uye yedu PC).
Kana paine zvikwata zvinoshanda zvausingazive, honguChokwadi vari kuba yako Wi-Fi.
Kana zvikaitika kuti hapana anopinda, hatisati tapedza, nekuti izvo hazvireve kuti komputa yedu yakachengeteka. Naizvozvo, isu tiri kuzoshandisa Wifislax ku tizvirwise uye nekudaro tarisa kana network yedu yakachengeteka. Nguva pfupi yapfuura, takaita a dzidziso inotsanangura maitiro ekuita izvi.
Kana iwe ukaona kuti kune vapambi munetiweki yako, unogona kutamba mutambo wemuvhimi anovhima uye nyatso kuziva kuti ndiani varwisi. Uchishandisa zvirongwa zvinouya mukugovera seKali Linux uye Wifislax, unogona kuita network packet uchinhuwidza uye murume ari pakati anorwisa kuti uone kuti vanhu ava vari kuitei pane yako network uye nekudaro uzive kuzivikanwa kwavo.
Chinja password uye chengetedza
Kana tangojekesa kuti network yedu yeWi-Fi haina kuchengetedzeka, vTichatora matanho ekuvandudza kuchengetedzwa kwaro. Tiri kuzowana router yedu nekuisa iyo gedhi muInternet browser uye kuwana neiri zita rekushandisa nephasiwedi yatakapihwa (kunze kwekunge tachinja). Pano tinogona kuwana chikamu chekuchengetedza uye nekuchinja password.
ari consejos iyo yandinokupa iwe kuti uwane password yakachengeteka ndeiyi inotevera.
Yakasimba password, ine mhando dzese dzemavara.
Chinja zita renetiweki.
Chekupedzisira, kana iwe uchida kuwedzera kumwe kuchengetedzeka, unogona kumisikidza iyo firewall ye router yako uye nekuwedzera mamwe matanho ekuwedzera senge yakasvinwa naMac kana iwe uchida kumwe kuchengetedzeka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Maitiro ekuudza kana yangu Wi-Fi iri kubiwa muLinux
Rowland Rojas akadaro
Linuxadictos ichirova muvakidzani WIFI kubvira 2016
Pindura Rowland Rojas
Jose Briceño akadaro
Masikati akanaka, hazvizove panzvimbo yekero yegedhi, kero yenetiweki. Semuenzaniso: Sudo nmap -sP 192.168.0.0/24 kana iri rese network 192.168.0.0 - 192.168.0.255.
Pindura kuna Jose Briceño
Ndine nhengo yakamira akadaro
Kana iwe uine chidimbu chekuba Wi-Fi, zvinoreva zvakajeka kuti uri murombo nezvakaderera zviwanikwa uye hapana munhu anofanirwa kurarama sehutachiona.
Pindura ini ndine nhengo yakamira
Kutenda neakanakisa posvo uye ndaida zvakanyanya.
Pindura kuna raj
Zvinhu zvekuita mushure mekuisa Arch (chikamu I)